समृद्ध समाजवादको आधारशिला निर्माणमा छौ : मन्त्री बाँस्कोटा - Tudikhel - Nepal's Popular Digital NewsPaper
समृद्ध समाजवादको आधारशिला निर्माणमा छौ : मन्त्री बाँस्कोटा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा को नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रमले नतिजा दिन थालेको बताएका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को समाजवादी नारामा जनताका विविध कार्यक्रम अगाडि बढाएको बताउँदै उनले तराई, पहाड र हिमालका जनतामा खुशीको सञ्चार प्रवाह हुन थालेको उल्लेख गरेका छन् । राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएको र जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि व्यवस्थित गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको मन्त्री बास्कोटाले प्रष्ट पारेका छन् । सरकारका कामकारवाही र समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सरकारको काम कारवाहीलाई तपाईले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ रु जनताले त सरकारको काम प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो गरेका छन् नि ?
हामीले कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छौँ । यो कोही कसैप्रतिको अविश्वास होइन । परिभाषित काममा केन्द्रित बन्नुपर्छ । त्यसैमा केन्द्रित बन्नुपर्छ भन्ने हो । हामीले सोही आधारमा कामहरु अगाडि बढाएका छाँै । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारा समाजवादको एउटा नारा हो । यो थाहा पाउनुपर्छ सबैले । चीनमा समाजवाद लागू भएको ७० वर्ष भयो । अहिले पनि चार पाँच करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि छन् । त्यहाँको व्यवस्था खराब होइन नि । निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । अमेरिका पूँजीवादको संसारको सबैभन्दा बलशाली तागत भएको मुलुक हो । त्यहाँ नभएको चिज नै केही छैन । अमेरिकामा ‘होमलेस’ कति छन् रु गरीब कति छन् रु समस्या त्यहाँ छैन रु छ । त्यसैले हामीले हाम्रा देशका जनतालाई सुखी राख्नका निम्ति राज्यको तर्फबाट सके जति विवेक पु¥याएर विवादरहित ढङ्गले पहलकदमी लिनुपर्छ । मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानूनहरु बने कि बनेनन् रु यसले भूमिहीन समस्या समाधानका लागि मद्दत पुग्छ । नागरिकलाई सम्मान र सुखको नाराभित्र समेट्छ । सुख र समृद्धि दिन्छ । पैसा मात्रै भएर मात्रै मान्छे खुशी हुँदैन । त्यसो भए खर्बपतिले पनि आत्महत्या गरेको सुन्नु पर्दैनथ्यो होला । सुखभित्र के कुरा आउँछन्भन्दा, सम्मान र सुरक्षा पनि सुखका कुरा हुन् । अब हामीले सन् २०२२ मा त अल्पविकसित देशबाट माथि उक्लने कुरा गरेका छौँ । त्यस बेलासम्म हामी आधारभूत खानेपानीको कुरा टुङ्गो लगाउँछाँै । अहिले नै हामी सुरुङमार्गतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ । सम्पर्क सञ्जालको विस्तारले सहज बनाउँछ । यो असाध्यै महत्वपूर्ण चिज हो । संसार नै आज ‘कनेक्टिभिटी’मा चलेको छ । रोड, समुद्र, यातायातका सञ्जाल पनि त्यहीभित्र पर्छ ।
हामीलाई ‘पपुलिस्ट’ हुनु छैन । ‘पपुलर’ हुनुपर्ला, तर ‘पपुलिस्ट’ हुनु पर्दैन । आत्मप्रचारको शिकार हुन चाहँदैन । जे गर्नुपर्ने हो, त्यसको ‘मेन कोर्स’ बाट विचलित हुन सक्दैनौँ । त्यसबाट दायाँबायाँ पनि हुन सक्दैनौँ । सुख, समृद्धिबाट लोकतन्त्र, शान्ति समृद्धिका मुद्दामा कानूनी, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक सम्पूर्ण कुरा पूरा गरेर अगाडि बढ्छाँै जसले गर्दा समृद्ध समाजवादको आधारशिला निर्माण गर्नेछ । यस वर्ष हामीले के भनेका छौँ, भने अघिल्लो साल आधार वर्षका रुपमा रह्यो । यस वर्ष कार्यान्वयन र अरु वर्ष हाम्रा परिणामका वर्ष हुनेछन् । यस हिसाबले हामी जान सक्छौँ । सञ्चारको क्षेत्रमा ‘क्लिन फिड’ कसैले ल्याएको थियो रु यसअघि पनि सरकारहरु थिए नि ?
‘ह्याकिङ’ गर्ने, बैंकिङ कसूर गर्ने, साइबर क्राइम गर्नेलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । साइबर सेक्युरिटी केन्द्र शुरु भइसकेको छ । डाटा सेन्टर स्थापना भएको छ । कहाँबाट हमला भइरहेको, छकहाँबाट ‘ह्याकिङ’ भइरहेको छ, त्यो थाहा पाउने प्रविधि जडान भइसकेको छ । इमेल निर्देशिका हामीले बनाएर कार्यान्वयन गरिसकेका छौँ । डाटा रिकभरी सेन्टर हेटाँैडामा खोलिएको छ ।
Published On: Saturday, August 31, 2019 Time : 6:53:59 472पटक हेरिएको